Ra’iisul Wasaaraha magacaaban Rooble oo kulamo muhiim ah ka wada Muqdisho +(SAWIRRO) – HalQaran.com
Ra’iisul Wasaaraha magacaaban Rooble oo kulamo muhiim ah ka wada Muqdisho +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Sii-hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya ayaa Axadda maanta ah la kulmay Ra’iisul wasaaraha magacaaban mudane Maxamed Xuseen Rooble.
Mr. Mahdi iyo Xildhibaannada wehlinayay ayaa Ra’iisul wasaaraha magacaaban u hambalyeeyay una muujiyay taageero iyo garab istaag.
Ra’iisal Wasaaraha magacaaban ee dalka Soomaaliya, mudane Maxamed Xuseen Rooble oo aqbalay xilka uu madaxweynaha JF Soomaaliya u magacaabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Mudane Rooble ayaa Golaha Shacabka weydiistay iney siiyaan codka kalsoonida, taas oo u suura galinaysa inuu soo dhiso xukuumad cusub.
Tags: kulan, Mahdi, RW Rooble, Xildhibaanno
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ‘Karaash’ oo maanta daah-furay Shirka maamul daadejinta Puntland
Booliska Cadaado oo soo qabtay Gaari siday Khamri aad u fara badan +(SAWIRRO)